Injabulo kumzala kaSenzo ngedokodo elisha - Ilanga News
Home Izindaba Injabulo kumzala kaSenzo ngedokodo elisha
Injabulo kumzala kaSenzo ngedokodo elisha
UMZALA kaSenzo Meyiwa (osesithombeni) owayengunozinti we-Orlando Pirates neqembu lesizwe laseNingizimu Afrika, iBafana Bafana, uthi uzizwa ekhululekile ngokuthi selize laphumela obala idokodo lesibili obekulokhu kukhulunywa ngalo ecaleni lokubulawa kwalo mdlali. UMnu Siya Miya, uthi uyajabula ukuthi selize lavela enkantolo leli dokodo eliwunombolo 375, elinabasolwa abahlukile kulaba ababoshiwe njengamanje ababhekene namacala enkantolo. Indaba yaleli dokodo lesibili isinesikhashana ilokhu ivela enkantolo, kodwa belingakaze lethulwe ngokusemthethweni.
Kulona kubalwa uLongwe Twala njengomsolwa wokuqala, uKelly Khumalo umsolwa wesibili, uGladness Khumalo owesithathu, nguZandi Khumalo owesine, nguTumelo Madlala owesihlanu, uMthokozisi Twala owesithupha noMaggie Phiri owesikhombisa. U-Adv Zandile Mshololo omele umsolwa wesihlanu, okunguyena owethule leli dokodo enkantolo, uyitshele ukuthi ngokophiko lwezokushushiswa komphakathi, (NPA) kuleli dokodo elivele izolo ngoLwesithathu, laba ababalwa kulona kumele babekwe icala lokubulala uMeyiwa ngenhloso ngokumdubula nelokuphazamisa kwabo ukusebenza kwengalo yomthetho.
U-Adv Mshololo utshele inkantolo ukuthi leli dokodo ulinikwe wumbuso izolo ekuseni. Kuvele ukuthi isinqumo esiqukethwe yileli dokodo lakamuva, sathathwa ngumqondisi weNPA eGoli, kanti esokushushisa abasolwa abasenkantolo njengamanje, sathathwa ngumqondisi weNPA, ePretoria. U-Adv Mshololo unxuse inkantolo ukuba ikuhlehlise ukuqulwa kwecala ngoba udinga isikhathi sokufunda leli dokodo lesibili, futhi athole nencazelo ngalo kwi-NPA. UMnu Miya ocacisile ukuthi akakhulumi egameni lomndeni uthi sekunesikhathi eside elwela ukuba leli dokodo livezwe obala.
Utshele ILANGA ukuthi wake wakhuluma ngalo no-Adv Andrew Chauke owayengumqondisi weNPA eGoli,waze wakhuluma neNhloko yeNPA, u-Adv Shamila Batohi ngalo. “Nginethemba lokuthi sekuzolandwa bonke laba ababesendlini beyovela enka-ntolo njengabasolwa,” kusho uMnu Miya. IJaji Tshifhiwa Maumela, linqume ukuthi kubuyelwe enkantolo ngoMsombuluko, okuyilapho okuzovunyelwana khona ngosuku okuzoqhubeka ngalo ukuqulwa kwecala.
Previous articleKUMENELE UTHISHA ODUTSHULWE ESIKOLENI
Next article12 JUNE 2022